Izany no jaguar mpiady ho woth ny antsipiriany toy izany elatra! Efa nivory no add-ons maro mba hahazoana ny vokatra farany. Ny tontonana tanteraka, mahafinaritra sy ny mahafinaritra. Ny feo dia nanitsy azy antsika. Present maro natolotra niaraka tamin'ny Force frantsay. Ny sary nalaina ny Tel Aviv miaraka amin'ny realism tonga lafatra. Very mora raisina. Mahatalanjona ny fiaramanidina. Download izany izao!
Ny Alpha Jet dia fiaramanidina miaramila nanaovana Franco-Alemana (Dassault Aviation - Dornier), noho ny fampiofanana na ny tany fanafihana. Ary naorina momba 500 vondrona am-polony ampiasain'ny firenena samy hafa, ary ny ekipa ho toy ny Patrouille de France hatramin'ny 1981.
Ny fanamboarana ny prototypes jaguar natomboka tamin'ny Oktobra 1966 sy Martsa 1967, ny Adour ny fitsapana voalohany teo amin'ny fitsapana dabilio. Janoary 9, 1968, ny Frantsay minisitry ny ny Tafika sy ny Minisitry ny Fiarovana any Londres no nanao sonia ny mba ho 400 fiaramanidina ny tanjona mitovy amin'ny Frantsay Air Force sy ny Royal Air Force. Ny orinasa jaguar natao ny 17 Aprily 1968. Current taona, rehefa nanao ny voalohany nandositra, ny fiaramanidina jaguar fandaharana no farany sy ny sekoly fampiofanana dia mampihen-danja ny RAF fiaramanidina mba manohana ny Tactical dikan. Ao 1970, ny jaguar fandaharana dia indray mandeha indray miova: tsy te RAF fanofanana fiaramanidina ary mitarika ho Tactical fiaramanidina mandanja ny jaguar.